Page-5 I-Aluminium Knoffled Standoff yaseChina, Umkhiqizi we-Aluminium Knoffled Knoffled
I-M3 Aluminium 6061 Round Standoff eneBlack Anodizing
Ukunemba okuzenzakalelayo kwe-aluminium standoff spacer Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona...
I-aluminium eyenziwe ngentambo yensimbi ejijekile Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona...
I-Aluminium double-hole standoff yekhompyutha enkulu Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona...
I-M3 Aluminium 6061 Round Standoff eneBlack Anodizing Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona...
I-M2 Female Threaded Round Standoff yozimele Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona okuqhubekayo...
Ikhwalithi ephezulu ye-M3 Knurled Threaded Round Aluminium Standoff Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho...
OEM CNC Turning Machine Aluminium Standoff Knoffled Isixhumi Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu....
Ikhwalithi ephezulu ye-Knurled Aluminium Alloy Pillar / Post / UAV Vehicle Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho...
I-Precision Custom Wholesale Knurled Aluminium Signoff eshibhile Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu....
I-Custom Turning Duplex / Aluminium Alloy Multicopter Standoff Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu....